Kn95 Mask, Inodzivirira Mask, Inoraswa Dziviriro - VTECH CHINA
The aluminium nose clip
Gadzirisa kukwana uye kuderedza inhalation yezvinhu zvinokuvadza.
Ultrasonic welding, tora ziya uye kwete kusimba
KN95 Inoraswa Anti-guruva Face Mask
Sei Sarudza VTECH
KN95 inyanzvi inogadzira
VTECH CHINA CO., LTD ndiyo nyanzvi inogadzira KN95 inodzivirira mask.Kambani ine guruva-isina workshop, chigadzirwa marabhoritari uye yakamisikidzwa yekuchengetera sisitimu yezvigadzirwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa.
Chigadzirwa chedu chakasimbiswa nehunyanzvi neUSA-FDA, EU-CE, uye China-GB.
12 mitsara yekugadzira mask
Kune gumi nemaviri mitsara yekugadzira yeKN95 masiki anoraswa ane zuva nezuva kuburitsa zviuru chiuru.
Export kunyika dzakawanda
VTECH KN95 masks haangotengerwe mudzimba chete, asi zvakare anotumirwa kuEurope, USA, Panama, nezvimwe.
Ganda rinoshamwaridzana&Kuchengetedza 3s jira rakapfava risiri-rakarukwa
zvidzivirire iwe nevanhu vakakupoteredza.
Chivabvu 21, 2020
Kuponesa hupenyu ndicho chaive chinangwa cheChina chete kuseri kwerubatsiro rwepasi rose, anodaro Wang
China yanga ichipa rubatsiro kune dzimwe nyika kurwisa COVID-19 nechinangwa chega chekuyedza kuponesa vanhu vakawanda sezvinobvira, Kanzura weHurumende uye Gurukota rezvekunze VaWang Yi vakadaro neSvondo.Pamusangano wevatori venhau wakaitwa pa...
Ita shuwa kuti hutano hwako hwekufema ndiko kutsvaga kwedu nekusingaperi
BEIJING - Vatongi veChinese vatora matanho matsva ekusimbisa hutongi hwemhando yepamusoro pekutengeswa kunze kwenyika zvinhu zvekurapa uye nekudzora nzira dzekubuda kunze kubatsira zvirinani kurwa kwepasi rose kurwisa chirwere chekoronavirus (COVID)